Dalka Suudaan oo khaati ka Taagan Quwadaha shisheeye ee Isdiidan oo ku hirdamaya • Oodweynenews.com Oodweyne News | Oodweynenews.com Oodweyne News
Dalka Suudaan oo khaati ka Taagan Quwadaha shisheeye ee Isdiidan oo ku hirdamaya
Hogaamiyayaasha mucaaradka ee waddanka Suudaan ayaa sheegay in maamulayaasha milateriga ku Lammaantahay Gacmo shesheeye.
kuwaas oo doonaya inay ka faa’iidaystaan khayraadka dabiiciga ah ee dalka iyo goobta istiraatiijiyadeed ee uu ku yaal.
Heshiis awoodda lagu wadaagayo ayaa dhawaantan waxaa gaadhay milateriga iyo Masuuliyiin Matalayay kooxaha mucaaradka ah .hasayeeshee waxaanan weli kala caddeyn mustaqbalka siyaasadeed ee waddanka Suudaan.
Hadaba waa kuwama dalalka ku lugta leh arrimaha Suudaan maxayse rabaan inay halkaas ka helaan?
Yaa Iibsanaya kheyraadka Suudaan?
Dalka labaad waa Shiinaha kaas oo dhoofsada qeybo badan oo ka mid ah shidaalka qeedhin ee dalkaasi.
Wax soo saarka shidaalka Suudaan ayaa mar waxa uu qeyb weyn ka ahaa dhaqaalaheeda hasayeeshee markii South Sudan ay dalkaasi ka go’day 2011 ayaa inta badan ceelashii saliidda waxaa qaatay dalkaasi.
Xeebta Suudaan ee Badda Cas ayaa marin muhiim ah u ah maraakiibta halkaas oo u dhaw dalka Yemen ee uu dagaalku ka socdo, dalal kala duwan ayaa waxa ay isku dayayaan inay galaangal halkaasi ku yeeshaan.
Inta badan ganacsiga dalkasai ayaa waxa uu haatan maraa Port Sudan oo ah Dekedda Istaraatiijiga ee Dalkaasi Leeyahay.
“Waa ay iska caddahay in Isutagga Imaaraatka Carabta uu galaangal weyn ku leeyahay Golaha ku meelgaarka ah ee Milateriga,” waxaa sidaasi sheegtay Annette Weber, oo ah sarkaal sare oo la shaqeeya Machadka Arrimaha Caalamka iyo Ammaanka ee Jarmalka.
Dad badan oo reer Suudaan ah ayaa waxa ay u dabaaldageen heshiiska awoodda lagu wadaagay ee dhawaan la gaaray
“Suudaan illaa 16,000 oo askari ayaa ka jooga xuduudda Sucuudiga iyo Yemen si ay uga qeyb qaataan amniga xuduudda”, sidaa waxa sheegay Dr Weber, kaas oo tixraaya hadal uu yiri sarkaal sare oo ka tirsan dawladda.
Ciidamada Suudaan ee jooga Yemen waxa madax u ah Jenaraal Maxamed ‘Xemeti’ Xamdan oo hadda ah xubin sare oo ka tirsan golaha milatariga ee xukuma dalka Suudaan.